रुपन्देहीमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न गृहमन्त्रीको गृहकार्य | Ratopati
personतेजेन्द्र के.सी. exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर ११, २०७८ chat_bubble_outline0
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृह जिल्ला रुपन्देहीमा नेपाली काँग्रेसको जिल्ला नेतृत्व सहमतिमा चुनिने पहल सुरु भएको छ । त्यसको लागि शुक्रबार तोकिएको महाअधिवेशन शनिवारका लागि सारिएको हो ।
रुपन्देहीमा यसअघि पालिका र क्षेत्रमा संस्थापन र इतर समूहले प्यानल बनाएरै निर्वाचनमा होमिएका थिए । पालिका ३ गते र क्षेत्रको ६ गते प्यानलसहित मैदान उत्रिएको दुवै पक्षहरू अहिले काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गृहमन्त्री खाँणको पहलमा जिल्ला नेतृत्व सहमतिबाटै चयन गर्न सहमत भएका हुन् । जिल्ला नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको भन्दै पार्टीले सहमतिको लागि समय मागेपछि निर्वाचनको कार्यक्रम शनिबारका लागि सारिएको निर्वाचन अधिकृत भेषराज घिमिरेले बताए ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गरी मङ्सिर ११ गते शनिबारका लागि तय गरिएको जनाएको छ । सहमति गर्नको लागि बिहीबारदेखि नै पटक पटक नेतृत्वको छलफल भएको थियो । संस्थापन र इतर समूहबाट जिल्लाका नेताहरूले जिल्ला कार्यसमितिमा भागबण्डा गर्ने लिखित सहमति गरेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । तर लिखित सहमति पत्र सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन् । यहाँ खास गरी देउवा पौडेल समूहसँगै केन्द्रमा देउवा प्यानल रहेका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाह छुट्टै शक्ति रहेको छ । तसर्थ तीन समूहको सहमतिमा नेतृत्व बन्ने देखिएको छ ।
गृहमन्त्री खाँणको पहलमा भैरहवामा बसेको बैठकमा तीन वटै समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला नेतृत्वमा भागबण्डा गर्ने भनिएको छ । जस अनुरूप सभापति, एक सचिव र सहसचिव संस्थापन पक्षले, दुई उपसभापति मध्ये एक जना भरत शाहले र एक जना संस्थापन इतर समूहले पाउने छ । संस्थापन इतर समूहले एक सचिव र सहसचिव पनि पाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी रहेको छ । तर नेताहरू अहिले त्यो विषय बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
कार्यसमितिमा क्षेत्रगत रूपमा निर्वाचित क्षेत्रीय सभापतिहरूले आ आफ्नो क्षेत्रबाट सदस्यको नाम सिफारिस गर्ने गरी सहमति भएको सभापति रज्जाकले बताए । गृहमन्त्री खाँणको नेतृत्वमा, लेखा समिति सभापति शाह, जिल्ला सभापति रज्जाक, पूर्व जिल्ला सभापति रामचन्द्र ढकाल,प्रतिनिधि सांसद प्रमोद यादव, प्रदेश सांसद अष्ठभुजा पाठक, क्षेत्र नं. ३ का पूर्वक्षेत्रीय सभापति मातृकाप्रसाद यादवले सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि लिखित सहमति गरेको सभापति रज्जाकले बताएका छन् । सहमतिसँगै हालका जिल्ला सचिव रामकृष्ण खाँण जिल्ला सभापतिमा सर्वसम्मत हुने अन्तिम तयारी रहेको छ । यसअघि दुई कार्यकाल सचिव भएका थिए । उनले सभापतिमा जानको लागि व्यापक तयारी समेत गरेका थिए ।
सर्वसम्मत नेतृत्व भनिए पनि पदाधिकारी र जिल्ला सदस्यमा भने को को पर्ने हुन अहिलेसम्म स्पष्ट नभएको आजको महाधिवेशन तयारीमा रहेका कार्यकर्ताहरू अलमलमा परेका छन् । सहमतिमा दुवै पक्षका नेताहरू आगामी दिन केन्द्रीयदेखि अन्य लाभको पदका लैजान पहल गर्नको लागि सहमत भएको एक नेताले बताएका छन् । रज्जाकले दुवै समूहका नेताहरूको समेत आगामी दिनमा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा सहमति जुटेको बताए ।